World Health Organization (WHO) Archives » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Fadzai Ndangana Mar 9, 2020
The government has advised the nation to keep calm, insisting the country had confirmed any COVID-19 cases to date. This follows widespread rumors that government was covering up confirmed coronavirus cases including that of a Mutare…
Typhoid Outbreak Alert in Gweru, Two Confirmed Dead
In a suspected case of typhoid outbreak, Gweru City Council has confirmed two deaths as a result of the water borne disease. In an interview, City Council Spokesperson, Vimbai Chingwaramutse confirmed that two people from Mkoba Infill had…
Fadzai Ndangana Nov 22, 2019
The Parliamentary Committee on Health and Child Care has slammed the government for crippling the already deteriorating health delivery system by dismissing doctors without a continuity plan. Addressing the permanent secretary in the…
Fadzai Ndangana Nov 12, 2019
A research conducted by the Ministry of Health and Child Care has concluded that people with bilharzia have a high risk of contracting HIV, 263Chat has learnt. This was said during the stakeholders meeting for the feedback on the results…
Fadzai Ndangana Oct 4, 2019
Fifteen out of 20 District Medical Officers graduated after completing studies in Field Epidemiology amid calls for successful personnel to apply basic public health skills at their stations. This translates to 75 percent pass rate while…
Fadzai Ndangana Sep 16, 2019
Cyclone Idai has come and gone. But six months after the national disaster ravaged three Southern African neighbouring countries, Mozambique, Malawi and Zimbabwe, a visit to one of the affected areas in Chimanimani still resembles a sad…